छोटकरीमा : फेवातालबाट ६ करोड लिटर पानी बहेर गयो..! (भिडियोसहित)
हिजोआज पोखरा आउने अधिकांश पर्यटक पोखराको प्रमुख पर्यटकीयस्थल फेवातालको स्वरूप देखेपछि अचम्ममा पर्ने गरेका छन्। ताल फोटो तथा भिडियोमा देखिने जस्तो स्वरुपमा छैन। जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीका अनुसार तालबाट सोमबारसम्म ५ करोड ८० लाख पानी बगाइसकिएको छ। फेवा तालको पानी किन बगाईदै छ ?
बाँध तथा नहर निर्माण गर्न भन्दै फेवातालको पानी एक मिटर घटाइएको हो। जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्कीका अनुसार तालबाट सोमबारसम्म ५ करोड ८० लाख पानी बगाइएको छ ।
फेवातालबाट ५ करोड ८० लाख लिटर पानी बहेर गयो, अब कहिले भरिएला ? (हेर्नुस्, भिडिओ)
किन छैन फेवातालमा पानी? || कहिले भरिएला Fewa Lake, Nepal || Pokhara
कार्यालयले सुरुमा २ मिटरसम्म पानी घटाउने लक्ष्य राखे पनि एक मिटरमै बाँधको ढोका बन्द गरेको हो । फेवातालबाट ठूलोमात्रामा पानीको सतह घटेकाले अहिले तालको आधा भागसम्म दलदल र माटोको लेदो जम्मा भएको छ । ठूलो मात्रामा पानीको सतह घटेपछि अहिले फेवातालको धेरै भाग बगर जस्तै देखिन पुगेको छ ।
फेवातालमा २०१८ सालमा भारतीय सहयोग मिसनको सहयोगमा पहिलो पटक ४६ फिट बाँध निर्माण गरिएको थियो । बाँध बाँधेर कुल १५ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाइका लागि नहर निमाण गरिएको थियो । पछि उक्त बाँध २०३१ सालमा बाँध फुटेर गएको थियो ।
पछि २०३४ कात्तिक १८ गते पुनः नयाँ बाँधको शिलान्यास गरिएको थियो । उक्त बाँध संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । उक्त बाँध निर्माण कार्य २०३५ सालमासम्पन्न भएको थियो । ३५ सालमा बाँध निर्माण भएयता हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्मतसम्भार गर्न लागिएको हो ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका अनुसार बाँध निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये १ करोड रुपैयाँ बाँध मर्मतका लागि र १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
मर्मतका लागि भन्दै एक्कासि पानी सुकाएको भन्दै जलारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आफूहरूलाई खबर नगरी पानी सुकाउँदा धेरै माछा मरेको र केही माछा बगेर गएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कसरी ह्वात्तै घट्यो फेवातालको पानी?